Toetran'ny toetr'andro, metatra hamandoana, nomerika nomerika - EMATE
Trano nomerika nomerika Hygrome ...
Famantaranandro bokotra mandro bokotra miaraka amin'ny timer, ...
Weather ambanin'ny tany toetr'andro manokana ...
Thermos Hymoometre azo entina portable ...
Fitaovana Backlit an-dakozia Backlit Kitchen ...
Maninona no mifidy anay!
EMATE ELECTRONICS CO., LTD. dia naorina tamin'ny volana martsa 2012. Orinasa mpanamboatra eo ambanin'ny EMATE Group. Mampiasa mihoatra nyOlona 400 ary any Fuzhou, faritanin'i Fujian, tanàna amoron-tsiraka atsimo atsinanan'i Sina, miaraka amina indostrialy maoderina 6.000 metatra toradroa.
Amin'ny maha-vaovao azy teknolojia avo lenta orinasa mampifandray R&D, orinasa mpamokatra entana, fanondranana ary e-varotra miampita sisintany, ny orinasa dia manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana sy ny fanamboarana tontolo iainana an-trano manara-maso ny vokatra elektronika hatramin'ny nanombohany.
Emate dia manana fototra tsy manam-paharoa tombony ara-teknolojia amin'ny teknolojia sensor detection environment, famolavolana rindrambaiko tafiditra, teknolojia fampitana RF sns, mahatsapa a > 70% tahan'ny namboarin-tena. Miaraka amin'ny mari-pankasitrahana sy patanty marobe, dia fantatra tsara izahay eo amin'ireo marika matihanina aryfivarotana lehibe manerana an'izao tontolo izao.
Ny fiatraikan'ny toetrandro dia mizara ho sokajy folo manaraka ireto: 1. Amin'ny toetr'andro mahery toy ny rivo-doza sy ny tsunami dia tsy afaka mivezivezy ny olona ary manimba ny famokarana sy ny fiainana aza; 2. Mandritra ny haintany sy ny tondra-drano dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny famokarana fambolena izany, ...
Ny China Cross-border E-commerce Fair dia fampiroboroboana ny e-commerce 6P fifanakalozana herinaratra amin'ny fampifandraisana ny famokarana sinoa sy ny fanjifana manerantany, ary ny fampidirana ireo loharanon-karena ara-tontolo iainana e-commerce mivelatra haingana. Atao in-droa isan-taona amin'ny lohataona sy fararano, misy fampiratiana lohataona ...
Jereo indray! Nanomboka tamin'ny 08:00 ny 20 ka hatramin'ny 06 Jolay ny 21 Jolay 2021 dia nisy oram-baratra mahery tany afovoany sy avaratry Henan, ary nisy oram-baratra mahery (250-350 mm) nitranga tany amin'ny faritr'i Zhengzhou, Xinxiang, Kaifeng, Zhoukou, Jiaozuo, sns. Ny faritra eo an-toerana Zhengzhou dia 500 ～ 657 mm; ny rainfa be indrindra isan'ora ...
Ny China Cross-border E-commerce Fair dia fampiroboroboana ny e-commerce 6P fifanakalozana herinaratra amin'ny fampifandraisana ny famokarana sinoa sy ny fanjifana manerantany, ary ny fampidirana ireo loharanon-karena ara-tontolo iainana e-commerce mivelatra haingana. Atao indroa isan-taona amin'ny lohataona sy fararano izy io, miaraka amina vinaingitra ...
Vao tsy ela akory izay, ny vaovao momba ny "Globalegrow E-commerce dia napetraka noho ny fatiantoka sy ny fandaminana indray" nipoitra tamin'ny fikarohana tao amin'ny Internet. Antony iray nahasarika ny sain'ity raharaha ity ny Globalegrow izay zanaky ny A-share voatanisa "cros ...
Nanomboka ny solstice fahavaratra tamin'ity taona ity isika tamin'ny 22 Jona, 13 Mey tamin'ny kalandrie volana. Ny solstice amin'ny fahavaratra no fehezin'ny masoandro voalohany voafaritra ao anatin'ny fe-potoana efatra amby roapolo, izay midika fa fanombohan'ny toetr'andro mafana amin'ny fomba ofisialy, ary avy eo mihamafana ny hafanana. ...
Ny "loko, ny fofona ary ny tsiro" no antony voalohany heverin'ny olona rehefa mifidy sakafo. Ny loko sy ny hanitra ary ny tsiro matetika dia mamaritra ny fomba fahandroan-tsakafo. Ny "Tatitra fikarohana momba ny sakafo voalohany" navoakan'ny Ivotoerana Hong Kong momba ny fiarovana ny sakafo dia nanambara fa ny ...
Lakilen'ny famolavolana ny vokatra elektronika ho an'ny mpanjifa
Ny vokatra elektronika ho an'ny mpanjifa dia manondro ireo vokatra elektronika izay natao manodidina ny fampiharana an'ny mpanjifa ary mifandray akaiky amin'ny fiainana, asa ary fialamboly. Ny tanjon'ny vokatra elektronika toy izany dia ny ahafahan'ny mpanjifa misafidy malalaka, mampiasa ary mankafy. Miaraka amin'ny ...